Ilay faribolana ahafantarana ny Repoblikan’i Madagasikara / Tombokasem-panjakana – Gasy Egypte
« Anisan’ireo zava-dehibe ary tena nanamarika ny tantaran’ny firenena Malagasy ny marika manokana hamantarana ny Repoblikan’I Madagasikara. Inona no tena hevitra fonosiny ary inona tokoa no antony nisafidianana azy? »
Na dia tamin’ny vanim-potoana faha-mpanjaka aza dia efa nisy marika amantarana ny fanjakana tsirairay nisy nanerana ny nosy izay matetika mifandray tanteraka amin’ilay toetry ny mpanjaka, ny vohitra misy azy, ny foko ao aminy, sns… (ohatra: ny fanjakana Merina sy Andrianampoinimerina). Nohon’ny nahazo fahaleovan-tena anefa i Madagasikara dia nazava avy hatrany fa mitambatra ho fanjakana tokana ka izany indrindra no tena tsy maintsy nanaovana ny marika hamantarana ny repoblika hirakitra ny singa rehetra maha-iray ny firenentsika sy ny Malagasy rehetra.
Ity manaraka ity ireo marika rehetra tsara ho tsarovana hatramin’izay nahazoan’i Madagasikara fahaleovan-tena:
Vao nahazo fahaleovan-tena ny firenena dia nohezahina natambatra anaty faribolana na ity marika ity ny tena mampiavaka an’I Madagasikara.
Tena miavaka izy ity amin’ireo rehetra satria tamin’ny vanim-potoana naha repoblika sosialista an’I Madagasikara ary nanana fifandraisana akaiky tamin’ny Vondrona Sosialista tany Rosia (URSS).
Nanomboka ny taona 1993 no tsy dia tena nisy fiovana intsony ny marika hamantarana an’I Madagasikara ary fanatsarana ilay marika tany am-boalohany.
Niova fotsiny ilay loko fototra fa nijanona ireo sary famantarana rehetra eo aminy.
Marihina fa ny fizaran’ny repoblika eto dia natao nanaraka ny fiovan’ny marika manokana hamantarana an’I Madagasikara, raha liana kosa hianao ahafantatra misimisy kokoa ny amin’ireo repoblika nifandimby dia manasa anao hitsidika ny rohy amin’ny tranokalam-pifandraisana : https://www.presidence.gov.mg/presidence/historique-de-la-presidence-de-la-republique.html
Miendrika faribolana (boribory hoy isika) hatramin’izay ilay izy. Efatra no sary fototra hita eo amin’ny marika hamantarana ny repoblikan’I Madagasikara ary samy manana ny heviny avy:
Ny sary tanin’I Madagasikara izay eo afovoany. Io no tsikaritra voalohany rehefa mijery ilay marika. Rehefa Malagasy dia manana sary an-tsaina na koa mahay manoritra io sary tanin’ny Madagasikara io avokoa satria dia nianarana any an-tsekoly izany.
Ny RAVINALA na ilay antsoin’ny vahiny hoe hazo natao ho an’ny mpandeha (Ravenala Madagascariencis). Betsaka no tsy mahalala fa maro be ny tombony azo avy amin’ny ravinala toy ny rano, akora ampiasaina amin’ny asa-tanàna sy tao-zavatra, lovia, fihinana ihany koa ny voany… Noho izany dia anisan’ireo harena sarobidy ny fanan’ny Madagasikara ity zava-maniry iray ity, izay tsy hita raha tsy ao amin’ny firenentsika irery ihany. Misoratra manarak’azy amin’ny tapany ambony ihany koa ny hoe: “Repoblikan’I Madagasikara”.
Ny tapany ambany dia ahitana lohan’omby miloko mena sy tanim-bary.
Ny hevitr’ilay lohan’omby dia hery raha amin’ny ankapobeny. Ny omby ihany koa dia anisan’ireo mariky ny harena ary tsy azo adinoina ihany koa ny BAREA (efa ho heritaona aty aorian’ny nilalaovan’ny ekipam-pirenena Malagasy tamin’ny CAN2019). Sorona ilaina amin’ireo fomba amam-panao na ny lanonana nentim-paharazana ihany koa ny omby.
Ireo tanim-bary sy ny salohim-bary amin’ny sisiny roa amin’ity faribolana ity kosa dia mampiseho ny singa iray iraisan’ny Malagasy rehetra: foto-tsakafon’ny Malagasy ny vary. Ny fananana tanim-bary lehibe makadiry ihany koa dia harena lehibe ho an’ny tompon’izany.
Ity faribolana ity moa dia matetika hitantsika, fa izao mazava sy haintsika ny hevitra fonosiny. Anstoina ihany koa hoe tombokasem-panjakana izy ity ary hita amin’ireo sehatra maro samihafa mifandray amin’ny fanjakana sy ny governemanta.